स्थानीय सरकार र पर्यावरण | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / स्थानीय सरकार र पर्यावरण
स्थानीय सरकार र पर्यावरण
Posted by: युगबोध in विचार May 14, 2018	0 62 Views
घो राही उपमहानगरपालिकाको खै रादे खि उत्तरतिर जाने सडकको दुबै छे उमा बिरुवा लगाएर बँ“सको बार बनाएको दे खियो  । यस् तै गरी विभिन्न ठाउ“का सडकमा पनि बिरुवा लगाएको दे खियो  । यो एकदमै राम्रो काम हो  । पर्यावरणप्रति सचे त र जागरुकता भएको दे खियो उपमहानगरपालिकाले ग¥यो कि जनताले गरे थाहा छै न । चाहे जे हो स् बाटो पनि फराकिलो , सडकमा हरियाली पनि बढ्ने अर्थात हरित शहरको नमूना भन्दा फरक पदैर् न । सबै स् थानीय सरकारले प्रकृतिमै त्री विकासको अवधारणा अपनाए कति राम्रो हुने थियो  । यति मात्रै हो इन, घो राही उपमहानगरपालिकाले कृत्रिम ताल निर्माण गरिरहे को छ भन्ने समाचार पढ्न पाउ“दा साहै ्र खुशी लाग्यो  ।
विकास गफ हाके र ह“ुदै न । भाषण छा“टे र पर्यावरणवादी भइ“दै न । यसको निम्ति काम गर्नुपर्छ । स–साना कामले ठूला–ठूला सकारात्मक उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकिन्छ । अझ सडकका दुबै छे उमा अनिवार्यरुपमा रुख त्यो पनि फलफूलका र औ षधिजन्य विरुवाहरु लगाए अझ दिगो , राम्रो र सुगन्धित हुने थियो  । नीमका बो ट लगाउ“दा मात्रै पनि धे रै रो गका कीटाणु नियन्त्रण हुने थिए । ‘एक गाउ“ एक पो खरी’को अवधारणा बनाए झन राम्रो हुने थियो  । कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण गदैर् जानु आजको आवश्यकता भइसके को छ । कृषिको आधुनिकीकरणको नाममा रासायनिक मल र विषादी प्रयो ग गनेर् हो इन । अग्र्यानिक कृषिबाट पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । किनभने जै विक मल र विषादीको विकास भइसके को छ । यो प्रविधि सारै सस् तो र भरपदोर् पनि छ ।
कुनै समय भारतले हरित क्रान्ति गनेर् भने र रासायनिक मल र कीटनाशक औ षधिको प्रयो ग ग¥यो । तर परिणाम के निस् िकयो भने कृषि जमिन सुक्खा र बञ्जड बन्दै गयो  । पानीका स्रो तहरु सुक्दै गए । यसबाट उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी मानव स् वास् थ्यका निम्ति एकदमै हानिकारक सिद्ध भएपछि अहिले विभिन्न ठाउमा रासायनिक मल र कीटनाशक औ षधिमुक्त क्षे त्र बनाउ“दै गइरहे को छ र अग्र्यानिकमा फर्किदै छ । हामीले खाद्यान्न स् वच्छ, स् वस् थ र दीर्घायु हुनका लागि खाने कि क्षणिक रुपमा पे ट भर्नलाई मात्र ? रासायनिक मल र औ षधि प्रयो ग गरी उत्पादन गरे को बस् तु मन्द विषयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा अब दुनिया“ले थाहा पाइसके को छ । एकपटक ने पालबाट युरो प गएको कै यांै क्वीन्टल चियापत्ती फिर्ता आएको घटना हाम्रासामु छ । त्यसै ले स् थानीय सरकारले अग्र्यानिक खे तीमार्फत कृषिलाई आधुनिकीकरण गनेर् तिर कदम चाल्नुपर्दछ । तर हाम्रा ने ताहरु के वल भाषण मात्र गर्दछन् । कर्मचारीहरु कागज मिलाउनमा ब्यस् त हुन्छन् ।
घो राही उपमहानगरपालिकाको १ र २ नं. वडामा पनेर् बुुका गाउ‘“का अगुवा किसानहरु को भे लाले बुका गाउलाई अग्र्यानिक पके ट एरिया बनाउने निर्णय गरी घो राही उपमहानगरपालिकामा पठाएका थिए । नगर प्रमुख नरुलाल चौ धरीको कार्यकक्षमा हामी गएको बे ला सो धे का थियौ ं– ‘बुकाको अग्र्यानिक पके ट एरिया बनाउने निर्णय भयो कि भएन ?’ भन्दा निर्णय ग¥यांै भन्नुभयो  । तर पछि युगबो धले प्रे स संयो जकस“ग सो ध्दा उहा“ले मापदण्ड नपुगे र निर्णय भएको छै न भन्नुभयो भन्ने सुन्नमा आयो  । जनताले माग गरे मापदण्ड पु¥याउने काम स् थानीय सरकारको हो इन र ? जनता जागरुक भएको बे ला साथ र हौ सला दिए विकासले गति लिने हो  ।
आज प्रधानमन्त्रीदे खि कृषिमन्त्री ह“ुदै प्रदे श र स् थानीय सरकारले अग्र्यानिक कृषिलाई बढावा दिने भाषण गनेर् तर जनताले हामी गर्छांै भन्दा मापदण्ड पुगे को छै न भने र टानेर् , कर्मचारीको भर पनेर् हो भने दे श विकास हो इन विनाश हुने छ । उनीहरुले त कागज हे नेर् मिलाउने काम मात्र गर्दछन् । आफूलाई फाइदा हुने भए चा“डै काम अगाडि बढ्छ अन्यथा कानून ते स् र्याएर रो क्नतिर लाग्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले यसतर्फ सो च्नुपर्दछ । बुकाका जनताले अग्र्यानिक पके ट एरिया बनाउन माग गरे का छन् । अब मापदण्ड पु¥याउन के –के गर्नुपर्दछ त्यो चे तना दिने काम कसको हो ? मापदण्ड पूरा गर्न स् थानीय सरकारले कदम चाल्नुपनेर् हो इन र ? संघीय सरकारको नीतिलाई प्रदे श र स् थानीय सरकारले लागु नगनेर् हो भने दे श समृद्धितिर हो इन लथालिंगतिर बढ्ने छ । अन्ततः संघीयता र स् थानीय सरकारको औ चित्य सकिन बे र लाग्ने छै न । संघीय सरकारको नीतिअनुरुप आ–आफ्नो नीति बनाएर जानुपर्दछ । स् थानीय सरकारका निर्णयहरु प्रदे श सरकार र संघीय सरकारले आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ ।
घो राही उपमहानगरपालिकाले पर्यावरणका विविध पक्षको संरक्षण र विकासलाई अगाडि बढाइरहे को सन्दर्भमा अब अग्र्यानिक कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भने र ब्यापक छलफल गर्नुपर्दछ । एउटा कुनै क्षे त्रलाई नमूना अग्र्यानिक कृषि क्षे त्र बनाएर जाने हो भने त्यसबाट आमजनता प्रभावित भई अग्र्यानिक खे तीतिर आकर्षित हुने थिए । त्यो ठाउ“ अग्र्यानिक कृषि पर्यटनको आधार पनि हुने थियो  ।
पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान के न्द्रले बुकामा युएनडिपी, जीइएफ÷एसजिपीको आर्थिक सहयो गमा बुकामा नमूना अग्र्यानिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ । घो राही उपमहानगरपालिकाले साझे दारको रुपमा काम गरे अवश्य सफल भइन्छ । काम पारदर्शी र इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्दछ । सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स् थानीय सरकारले बुझ्नुपर्दछ । त्यसै ले उक्त क्षे त्रलाई नमूना अग्र्यानिक पके ट क्षे त्र घो षणा गर्न ढिलाइ गर्नुह“ुदै न । यो घो षणा गरे पछि नै काम गर्न सहज हुने थियो  । यसतर्फ नगरले चा“डै सो च्नुपर्दछ । अग्र्यानिक उत्पादन रासायनिकभन्दा कम हु“दै न भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । जनताको उन्नति र प्रगतिमा सबै ले ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रा हरे क काम प्रकृतिमै त्री हुनुपर्दछ ।
जनताबाट उठाएको चकोर् सम्पत्ति करबाट जनताले दिगो विकासको आशा गरे का छन् । जनताले कर स् थानीय सरकार पाल्न दिएका हो इनन् भन्ने कुरा ने पालका स् थानीय सरकारहरुले बुझ्नुपर्दछ । अब गणतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीलाई जनताको घरदै लो सम्म पु¥याउने दायित्व स् थानीय सरकारको हो  । जनताप्रति उत्तरदायी भएर पारदर्शीरुपमा काम गरे यो व्यवस् था मजबुत बन्छ । अन्यथा पुनः बिद्रो ह हुनसक्छ । बिद्रो ह कम्युनिष्टकै नाममा पनि हुन सक्छ भने राजाको नाममा पनि हुन सक्छ । अहिले आफनो गास काटे र जनताले कर तिर्नुपनेर् अवस् था छ । त्यसै ले खो क्रा आश्वासन र भाषणले अब काम गदैर् न, व्यवहारमै दे खिनुपर्दछ । अबको विकास प्रकृतिमै त्री हुनुपर्दछ भने र आम जनताले बुझ्दै गएका छन् । राम्रो काम भएन भने जनताले कर नतिनेर् आन्दो लन गरे भने त्यतिखे र के गनेर् ? राम्रो स“ग सो च अनि काम गर । जनतालाई सपना हो इन काम चाहिएको छ । ठूला सपना तिमीहरु दे ख तर जनताले दे ख्ने सपना त बाटाघाटा पक्की हो उन्, सिंचाईको राम्रो व्यवस् था हो स्, कृषिमा राज्यले सहयो ग गरो स्, पर्यटन विकास हो स्, पर्यावरणका विविध क्षे त्रको संरक्षण हो स्, प्रदूषण न्यूनीकरण ह“ुदै जाओ स, प्रकृतिमै त्री कानून बनून्, शान्ति सुरक्षाको ग्यारे ण्टी हो स, सम्पूर्णखाले लागूऔ षध पूर्णरुपमा बन्द हो स्, मादक पदार्थ सके बन्द, नसके नियन्त्रण र व्यवस् िथत हो स्, गुणस् तरीय शिक्षा र स् वास् थ्यको जिम्मा सकभर राज्यले ले ओ स् नसके सुविधा दे ओ स् । यस् तै –यस् तै स–साना काम गरे पुग्छ । त्यसै ले अनावश्यक ठूला–ठूला सपना नदे खाऊ । यसले अन्ततः आफै लाई नो क्स् ाान पु¥याउ“छ भन्ने कुरा बुझ्दा हुुन्छ ।
अहिले पर्यावरण प्रदूषण र विनाशका कारण ने पाली जनताले कुनै न कुनै रुपमा पीडा बे हो रिरहनु परे को छ । सबै भन्दा बढी र चा“डै प्रभावित हुने भने कै गरिव, बालबच्चा र महिला नै हुन् । यो पीडा हाम्रो कारण थो रै हो ला तर अर्काको कारणबाट बढी भो ग्नु परिरहे को छ । गर्दै नगरे को अपराधको सजाय हामीले भो ग्नु परिरहे को छ । विकासका नाममा सम्पन्न दे शहरुले गरे को पर्यावरणीय अपराधको सजाय आज हामीले भो ग्नु परिरहे को छ । यसको क्षतिपूर्ति सहज र सरलरुपमा हामीले पाउनुपर्दछ । अब हाम्रो दे शमा पनि प्रदूषण बढाउने ठूला उद्यो ग खुल्दै छन् । जनतालाई प्राथमिकता दिदै वन विनाश गनेर् काम हु“दै छ । यसले झन गम्भीर समस् या ल्याउने छ । जलस्रो तको दे श भने र चिनिने ने पाल पानीबिहीन बन्ने अवस् था सिर्जना ह“ुदै छ । हाम्रा नदीनालाका पानी सुस् त–सुस् त हामीले प्रयो ग गर्न नपाउने अवस् था सिर्जना हु“दै छ । ने पालको पानीले भारतमा सिंचाई हुने अवस् था बढ्दै छ । यस् तो अवस् थामा हाम्रा खहरे खो ला, ताल र स–साना दलदले स् थलहरुको दिगो संरक्षण नगनेर् हो भने चा“डै नै ने पाल मरुभूमिमा परिणत हुने छ । हाम्रा वनजंगलको दिगो संरक्षण गनेर् नीति बनाउनुपर्दछ ।
एकपटक वै ज्ञानिक वन व्यवस् थापनको नमूना हे र्न भने र दाङका पत्रकारहरुलाई पश्चिम दाङको एउटा सामुदायिक वनमा लगिएको थियो  । त्यहाको वनमा भएका रुख र जमिनको बनो ट हे र्दा झसंंगै भइयो कतै वै ज्ञानिक वन व्यवस् थापनका नाममा बर्वाद त बनाइदै न भने र । भिरालो जमिन, फो स्रो बालुवासहितको माटो अनि रुख विरुवा पातला । यति मात्रै हो इन, बुट्यान सखापै पारिएको छ । जमिन नांगो छ । पानी प¥यो भने सहजरुपमा भूक्षय हुने र त्यहा कुनै पनि विरुवाको वीज अड्किन नसक्ने भए पछि भएका रुख बुढा भएपछि काटिन्छ अनि त्यो भिरालो सामुदायिक वनको अवस् था कस्तो हो ला ? त्यतिखे र दे खाउन लग्ने लाई भनियो – ‘हजुर यस्तो त गर्नुभएन नि । तपाइहरुको भाषामा भनिने वै ज्ञानिक वन व्यवस् थापन त तराईको मै दानी फा“टमा गनेर् हो  । यहा त भूक्षय पनि रो क्नुपर्दछ । यसले प्राकृतिक वनको स्वरुप नै बिग्रन्छ ।’ अधिकांश सामुदायिक वन प्राकृतिक वन हुन् । मै दानी भागमा भएका निजी वनहरुमा हो यस्तो व्यवस् थापन गनेर्  । जो ब्यावसायिकरुपमा बनाइएको हु्ुन्छ । विरुवा चाडै हुर्काएर चाडै बिक्री गर्ने उद्दे श्य हुन्छ । सामुदायिक वनहरुले त वातावरणीय पक्षलाई पनि हे र्नुपर्दछ भने जनता को आवश्यकता पनि पूरा गर्नुपर्दछ । त्यसै ले सो चे र वनको व्यवस्थापन गनेर् हो भन्ने सुझाव दिएको थिए“ । अहिले स्थानीय सरकारमा जिम्मे वारी आएको छ । बचाउने वा नष्ट गनेर् तपाइ“हरु जिम्मे वार भएर आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
यसै मुताविक नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । स् थानीय सरकार नमूना बन्न सक्नुपर्दछ । जनताको हितमा प्रकृति संरक्षणमा दिनरात खटे र जानुस् । तपाइहरुले राम्रो गर्नुभयो भने ब्यवस् थाप्रति जनताको दृढ समर्थन हुने छ । जनतामा नवीन आशा र भरो शा पलाउने छ । अन्यथा मुलुक अस् िथरतातिर अगाडि बढ्ने छ । यसको जवाफदे ही तपाइ“हरु नै हुनुपनेर् छ ।
Previous: हम फटावाला नवा पैन्ट पहिरकै बरात जाबै
Next: स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाऊ